आज माघे सक्रान्ती, गोरखामा कतै गोरु जुधाईँदै, कतै साँस्कृतीक कार्यक्रम | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १ माघ २०७६, बुधबार ०६:५१
आज माघ महिनाको पहिलो दिन अर्थात माघे संक्रान्ति । घिउ, चाकु र तरुललगायतका परिकार खाएर मनाइँदै छ । आजदेखि सूर्य धनु राशीबाट मकर राशीमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघे संक्रान्तिलाई मकर संक्रान्ति पनि भन्ने चलन छ ।
माघे संक्रान्तिको अवसरमा चितवनको देवघाट, सुनसरीको बराहक्षेत्र, नुवाकोटको देवीघाट, बर्दियाको ठाकुरद्वारालगायतका स्थानमा स्नान गर्नेको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको छ । आजको दिन परिवारका सदस्य, आफन्त तथा साथीभाइसँगै बसेर तरुल, चाकु, लड्डु सखरखण्डा, रोटी तथा घिउलगायतका परिकार खाएर रमाइलो गर्ने चलन छ । माघे सक्रान्तीको दिन आज गोरखा नगरपालिका १० छेवेटार र कागवेनमा विषेश कार्यक्रम हुँदैछ ।
आरुघाट, फुजेल लगायतका ठाउँमा गोरु जुधाउने कार्यक्रम समेत रहेको स्थानीयले बताएका छन् । आज गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । तराईमा आजको दिनलाई ‘तिला सकराइत’ भनिन्छ । थारु, मगर र छन्त्याल समुदायले भने नयाँ वर्षका रूपमा माघी पर्व मनाउने गर्छन् ।